DZIMA WINDOWS 10 MATIPI, MATIPI UYE MAZANO POP-UP - WINDOWS 10
Dzima Windows 10 Matipi, Matipi uye Mazano Pop-Up
Na Windows 10 Microsoft Zivisa Zvitsva zvitsva uye app. Zvakare, Microsoft Ita shuwa kuti vashandisi vanonyatsoziva nezvese maficha ekuvandudzwa nemazano anobuda kunze, matipi uye mazano pakona yezasi yekurudyi kwechiso kana chinhu chitsva chabuda. Nepo mamwe matipi achigona kubatsira, mamwe mazano anogona kusanganisira kushambadzira. Kune vanotanga, iwo maitiro akanaka kwazvo kukoshesa aya 'mazano,' sekudanwa kwaMicrosoft, Asi vashandisi vazhinji vanongovaona vachishungurudza.
Zviri Mukati ratidza 1 Dzvitsa zano reWindows Kubva kuZvirongwa piri Dzima windows zano popup Uchishandisa Registry Edhita 3 Boka mutemo mupepeti kuti Disable windows zano popup 4 Disable Ads, Matipi uye Mazano pane Lock Screen
Kana iwe uri kutsvaga Bvisa Izvi Zvinotsamwisa Windows 10 Matipi, Matipi, uye Mazano Pop-Up Pano tevera pazasi matanho ekudzima Windows Pfungwa Pop-up.
Dzvitsa zano reWindows Kubva kuZvirongwa
unogona kudzima zviri nyore mukati Zvirongwa zveapp uye System > Notifications & zviito . Pano iwe unongoisa iyo Tora matipi, manomano, uye mazano sezvaunoshandisa Windows kuisa ku Off .
Dzima Matipi, Matipi Uye Mazano MuWindows 10
Dzima windows zano popup Uchishandisa Registry Edhita
Ongorora: Registry chikamu chakakosha che windows komputa, Ita iyo isiriyo nadzurudzo inokonzeresa nyaya dzakakomba. Tinokurudzira kutanga gadzira sisitimu yekudzorera poindi usati waita chero shanduko.
Kutanga Dhinda Win + R, Type regedit ndokurova kiyi yekupinda. Pano Mune ruboshwe pane ye Registry Mhariri hwindo, enda kune inotevera rejista kiyi:
Kana iwe usina kuwana iyo CloudContent kiyi ingori pakona kurudyi windows registry kiyi -> nyowani kiyi uye uitumidze se CloudContent.
windows 10 1903 iso yakananga kurodha pasi
Sarudza CloudContent uye Mune yekurudyi pane ye Mahwindo registry kiyi, kurudyi tinya uye sarudza Nyowani > DWORD Kukosha . Taura zita registry richangobva kugadzirwa DWORD ( REG_DWORD se DisableSoftLanding uye tinya kaviri pairi kuti uchinje iyo Value data Uye gadza iyo Hexadecimal base kukosha ku 1 uye tinya Zvakanaka . Vhara Registry Mhariri uye reboot kuita shanduko dzinoshanda.
Boka mutemo mupepeti kuti Disable windows zano popup
Ongorora: Boka mutemo Feature inongowanikwa pro Edition yeWindows. Imba Basic Edition haina group mutemo Edhisheni Feature.
Kutanga Vhura Boka mutemo ne Press Win + R Type gpedit.msc uye rova ​​Enter kiyi kuti uvhure Yemunharaunda Boka Policy Policy . Zvino enda ku
Pano pane pane yekurudyi tarisa iyo Kugadzika anonzi Usaratidze matipi eWindows . Tinya kaviri pairi kuti uchinje mamiriro ayo:
Pano Pane mutemo gadziriso hwindo, seta chinzvimbo ku Yakagoneswa uye tinya Nyorera ichiteverwa Zvakanaka . Vhara Boka Policy mupepeti uye unomhanya gpupdate / simba raira kuti uvandudze Injini yeboka Injini . Kana iwe unogona Kutangazve windows kuti uvandudze mutemo weboka unoshanda.
Disable Ads, Matipi uye Mazano pane Lock Screen
Na Windows 10 1903 kugadzirisa Microsoft Yakatanga Kuratidza Ads, Matipi uye Mazano pakuki Screen. Kana iwe uri kutsvaga kuvamisa
Vhura Zvirongwa app, enda ku Kuita kwako -> Lock screen peji. Pano Ita chokwadi ' Windows Spotlight ”Haina kusarudzwa mu Mhemberero donhwe-pasi bhokisi. Kana yakasarudzwa, chinja mhando yekumashure kuita Mufananidzo kana Slideshow sarudzo.
Tevere Bvisa iyo Wana chokwadi chinonakidza, matipi, manomano, uye zvimwe pane yako yekukiya skrini sezvakaratidzwa pasi apa.
Ndinovimba mushure mekutevera aya matanho iwe unogona nyore Kuremadza /Dzima Windows 10 Matipi, Matipi uye Mazano Pop-Uppane iwe laptop kana desktop. Une chero mubvunzo, Pfungwa nezve ino positi inzwa wakasununguka kukurukura pane zvakataurwa bellow.
haigone kuchinja kupenya windows 10
windows tarisiro yekukiya skrini mifananidzo
tanga menyu yakakosha kukanganisa kugadzirisa
windows 10 yakanamatira pane yekukiya skrini nekutenderera denderedzwa
ati radeon mifananidzo kadhi yamira kushanda
sei yangu google chrome yakamira kushanda